Shandadaha boorsada dibedda ee Shiinaha - Jumlada & Iibsashada dhimista boorsada dibedda - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Boorsooyin>Boorsada dibedda
Safarrada socodka waxay badanaa u baahan yihiin boorso xirfad-yaqaan ah, si aad si fudud ugu qaadi karto biyo, cunto, dhar kale iyo baahiyo kale. Maaddaama nashqadda, awoodda, ku habboonaanta iyo shaqeynta boorsooyinka dhaadheer ay aad u kala duwan yihiin, way adag tahay in la ogaado shandadda la iibsanayo. Sidaa darteed, waxaan u sameynay tusahan boorsada socodka si aan kaaga caawino inaad doorato boorsadaada socodka kugu habboon.
Safarada kaamamka badanaa waxay ubaahan yihiin boorso xero xirfad leh, sidaa darteed waxaad si fudud uqaadan kartaa biyo, cunto, dhar kale iyo baahiyo kale. Maaddaama boorsooyinka kaamku aad ugu kala duwan yihiin naqshadeynta, awoodda, ku habboonaanta iyo shaqada, way adag tahay in la ogaado shandadda la iibsanayo. Sidaa darteed, waxaan u sameynay tusahan boorsada socodka si aan kaaga caawino xulashada boorsada kaamamka ah ee adiga kugu habboon.
Safarada buuraha badanaa waxay ubaahan yihiin boorso xirfad yaqaan oo buur-buur ah, sidaa darteed waxaad si fudud ugu qaadi kartaa biyo, cunto, dhar kale iyo baahiyo kale. Maaddaama nashqadda, awoodda, ku habboonaanta iyo shaqeynta boorsooyinka dhaadheer ay aad u kala duwan yihiin, way adag tahay in la ogaado shandadda la iibsanayo. Sidaa darteed, waxaan u sameynay tusahan boorsada socodka si aan kaaga caawino inaad doorato boorsadaada socodka kugu habboon.
Shandad noocee ah ayaa buuxin karta baahiyaha dadka isticmaala safarka masaafada dheer? Ugu horreyntii, waa inaad tixgelisaa inay jiraan waxyaabo badan oo aad u baahan tahay inaad u soo qaadato safarka dheer, sida dharka, laptop-yada shaqada iyo waxbarashada, iPad, musqulaha gaarka ah, alaabada daryeelka, kabaha iyo waxyaabo kale oo badan. Si kastaba ha noqotee, tani waxay u baahan tahay boorso boorso aad u weyn. La degso walxaha aad u isticmaasho safarka masaafada dheer. Sidaa darteed, waxaan diyaarinay shandadaha ugu fiican ee boorsooyinka iyo boorsooyinka boorsada loogu talagalay xaaladdan:
Qalabka dharka ee loo isticmaalo boorsooyinka milatari waxay leeyihiin astaamo badan, laakiin qaar ka mid ah kuma haboona dadka casriga ah. Si kastaba ha noqotee, dhab ahaan uma baahnid inaad ku qaadatid boorso goobta dagaalka, markaa uma baahnid ogaanshaha infrared, rasaasta, iyo astaamaha dabka aan dabka lahayn. Astaamahan aan la adeegsan waxay mudan yihiin in lagu daro culeyska xirmada. (2) Marka boorsooyinka milatari loo adeegsado nolosha, iska caabbinta iyo iska caabbinta biyaha waa mid aad u xoog badan oo wax ku ool ah, laakiin waa in la ogaadaa in dharka badan ee u adkeysiga u adkeysanaya, si fiican u caabbinta biyaha, maxaa yeelay guud ahaan, iska caabbinta culeyska culus. Adag oo aan biyuhu oolin, ayaa sababi doona boorsada oo faaruq noqota.